Fiompiana Boribory Ambany China Manufacturers & Suppliers & Factory
Fiompiana Boribory Ambany - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 9 vokatra ho an'ny Fiompiana Boribory Ambany)
Ny tsiranoka ambany amin'ny tetezana ambany amin'ny bateria
ny tebiteby ambany ary ny vovoka amin'ny gripa ho an'ny solaitrabe Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny...
Zava-mahadom-pamokarana ambany ho an'ny tandroka ho an'ny Pharmaceutical intermediate 12.2mN / m Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning...
Ny vovon-tseraseran'ny tebiteby ambany amin'ny tadin-davenona
Toeran'ny tsiranoka ambany amin'ny tadin'ny tavy ambany amin'ny loko mihetsika Hydrofluoroether mitadiovana <100ppm Ny votoatin'ny rano dia vokatra azo tsapain-tanana amin'ny Eco, sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny...
Ny vovon-tseraseran'ny tebiteby ambany amin'ny tavy ho an'ny kristaly
Ny vovon-tseraseran'ny tebiteby ambany amin'ny tavy ho an'ny kristaly Politika mampidi-doza: Tsy hitranga izany Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny...
Ny tsiranoka marefo amin'ny taha-tsiranoka ambany amin'ny faritra voatanisa
Ny tebiteby ambany sy ny vovo-drivotra ambany Hydrofluoroether detergent c durante de partie precision ou disposition des particulates sélectionnelle pour une solvent séparation et sèche system. hydrofluoroether ( HFE) dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina,...
Ny tebiteby ambany amin'ny tora-pasika fanodinana ny felam-paty
Ny tebiteby ambany amin'ny tora-pasika fanodinana ny felam-paty [ Nano ny fanamafisana ny lokon'ny fanorenana ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia...
Toe-pahaizana momba ny fiompiana trondro goavam-be ho an'ny mpampiantrano lehibe
Toe-pahaizana momba ny fiompiana trondro goavam-be ho an'ny mpampiantrano lehibe Ny andiam- bolam-bolam-pilaminana natsangana dia ekolojika, tsy misy entona avy amin'ny solika, izay manana dielectric avo. Ny tsy fahampian'ny entona simika, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fisehoan-javatra hafahafa...
Fiompiana Boribory Ambany Fiompiana boribory ambany Fiompiana ambany Fiompiana trondro 54 Mibaribary ambany Fiompiana hydrofluoro ety HFE Fiarovam-pahefana mitahiry rano Fiatrehana ambany